Raitara Bele Samikshe App Download For Android [Vaovao 2022]
Salama daholo, eto izahay miaraka amina fampiharana Android mahatalanjona, izay fantatra amin'ny anarana hoe Raitara Bele Samikshe App. Io no rindrambaiko Android novolavolaina farany ho an'ny tantsaha Karnataka, India mba hanampiana ny sampana fambolena amin'ny fomba rehetra.
Araka ny fantatrao dia India no tany fambolena faharoa lehibe indrindra eran-tany ary misy olona marobe mifandray amin'io sehatra io. Any atsimoandrefan'i India no misy an'i Karnataka ary iray amin'ireo tany fambolena be indrindra.
Izy io koa dia mizara ny morontsiraky ny Ranomasina Arabo, izay miteraka olana amin'ireo tantsaha. Matetika ny loza voajanahary dia misy fiantraikany amin'ny tany fambolena ary noho ny farihy misy ny angon-drakitra dia misy ny olana amin'ny governemanta raha manapa-kevitra.
Ka ity fampiharana ity dia ampahafantarina ny olona hanamorana azy ireo. Misy lafin-javatra samihafa amin'ity fampiharana ity, izay hozarainay aminareo rehetra amin'ny antsipiriany. Noho izany, raha hampiasa an'ity fampiharana ity ianao dia amporisihinay ianao hahafantatra momba izany. Mijanona fotsiny aminay dia hizara izany rehetra izany izahay.
Topimaso momba ny Raitara Bele Samikshe App
Izy io dia fampiharana Android, izay novolavolain'ny talen'ny e-Governance, Governemanta Karnataka Productivity. Izy io dia novolavolaina manokana ho an'ny tantsaha mba hahazo fanampiana vonjimaika raha sendra voina voajanahary ary manana vaovao vaovao momba ny voly sy ny toetr'andro ary maro hafa koa izy ireo.
Ity no dingana tsara indrindra avy amin'ny governemanta hanohanana ny sehatry ny fambolena satria manolotra ny iray amin'ny tany fambolena sy vokatra tsara indrindra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena i Karnataka. Ny sasany amin'ireo voly sy voankazo lehibe, izay ambolena ao amin'ity fanjakana ity, dia ao amin'ny lisitra eto ambany.
Betsaka ny vokatra atolotr'ity tany ity. Saingy noho ny firaiketam-po amin'ny morontsiraka dia matetika ny loza samihafa no mamely an'ireo tany ireo, ary misy fiantraikany bebe kokoa amin'izy ireo ny mponina. Noho izany, miaraka amin'ny fanampian'ity fampiharana ity, ny governemanta dia hanome ny mpandray tombony amin'ny tranga rehetra.
Mila misintona ny Bele Samikshe App fotsiny ianao ary misoratra anarana amin'ny kaontinao. Tokony omenao tsara ny fampahalalana rehetra, izay hanomezan'ny manampahefana fanampiana araka ny fahaverezanao. Raha manana olana amin'ny fidirana an'ity fampiharana ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
anarana Raitara Bele Samikshe
Anaran'ny fonosana com.csk.KariffTPKfarmer.cropsurvey
Developer Talen'ny e-Governance, Governemanta Karnataka
Rehefa nizara ny sasany tamin'ireo fiasa ato amin'ity rindrambaiko ity izahay rehetra, saingy misy bebe kokoa izay hozarainay aminao. Raha te hizara ny traikefa manokana an'ity fampiharana ity aminay rehetra ianao dia azonao atao ny mampiasa ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Ny fangatahana ofisialy dia mandrafitra ny governemanta
Manohana ny tenindrazana ihany
Tsy misy fividianana fampiharana
Raitara Bele Samikshe Apk dia misy ao amin'ny Google Play Store ary mizara rohy azo antoka ho anao rehetra koa izahay. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity. Tsindrio ny bokotra fampidinana ary miandrasa segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Raha vantany vao vita ny fisintomana dia mila manova ny toe-javatra ianao. Tsy dia sarotra ny manamboatra azy io, fa hizara ny dingana rehetra amin'ireo dingana etsy ambany izahay. Mila manaraka ireo dingana fotsiny ianao mba hanaovana fametrahana tonga lafatra.
Marika 'Source tsy fantatra' ary mivoaka ny fanovana
Tsindrio ny rakitra Apk ary safidio ny safidy Install
Raitara Bele Samikshe App no ​​endrika fangatahana tsara indrindra ho an'ny governemanta hanampiana ny sehatry ny fambolena. Noho izany, mahazoa tombony amin'ity fampiharana maimaimpoana ity ary ampivoaro ny famokaranao. Ho an'ny fampiharana mahatalanjona kokoa dia mitsidika hatrany ny anay tranonkala.
Sokajy Apps, famokarana Tags App Bele Samikshe, Raitara Bele Samikshe Apk, Raitara Bele Samikshe App Post Fikarohana
Makà Dana Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]
Sax Video Player All Format Apk Download Ho an'ny Android